Kufamba & Kushanya: Hapana Kukoshera Munguva dzeCOVID-19? |
Location: musha » Kutumira » wedzero » Kufamba & Kushanya: Hapana Kukoshera Munguva dzeCOVID-19?
Kufamba & Kushanya: Hapana Kukoshera Munguva dzeCOVID-19?
30 min kuverenga
Mufananidzo wakatenderwa naAlexandra_Koch kubva kuPixabay
Kushanya kunoratidza nharaunda inoigadzira: Mapaketi akachipa anokwezva vashanyi 'vakachipa' - sezvo vazhinji veavo vanhu vari kuuya izvo vaenzi vangadai vasina kugamuchirwa. Kuvhura dzimwe nzvimbo dzekuenda uye kuita kuti dzigoneke kune vafambi vakawanda chave chiri chinangwa chinogoneka kusvika parizvino. Pave paine chikonzero chekuisa mitengo yendege isingasviki muripo weairport? - Hazvidi kuti titaure kuti takabatwa muhurongwa hwekunyepedzera kuedza kuita kuti Tourism iite se 'democracy', zvinoreva kuti inokwanisika kumunhu wese - kukanganisa kwedemocracy kunoderedzwa kusvika pakurasikirwa kwemitengo.
Ndiani anoshamisika kuti mhando yemafungiro e "discount" yaida mutero wayo, sekuratidzira kunoratidza: Misa Tourism inokunda uye inotaridza hupenyu hwenzvimbo netsika, asi bhiri rekupedzisira rakakwira: Kukanganisa kwakashata kunodarika mhedzisiro yakanaka, nzvimbo yekufamba inoonekwa zvakanyanya, chifananidzo chiri kubva pakuipa kuenda pakuipisisa. 'Overtourism' ndiro izwi rinokanganisa kugaya kwedu, zvese sevaenzi nevashanyi. Ava vanosarudza kuenda kumwe, vachisiya 'nzvimbo dzakarasika'. Chekupedzisira, vagari venzvimbo vanogona kuratidza pamusoro pematongo ehotera akapfapfaidzwa negraffiti. Pakupedzisira, kurwara kwavo kunogona kukurudzira fungidziro yevashanyi vanonzwisiswa kune ephemeral.
Kuedza kusimbaradza Tourism kuburikidza nekusimudzira (muchinjika-) kubatana maererano nekusimudzira tsika nemagariro nhaka kazhinji ine hafu-moyo. Sustainability inouya pane matipi-zvigunwe kana kubhadharwa miromo-sevhisi chete, panguva iyo inoda kuomesesa kuronga, inobatana maoko-pakuita, uye nzwisiso yekuti kuenderera kunoda mari.
Zvisinei nekuedza kwakawanda kusimbisa huremu hwezvematongerwo enyika hweKufamba & Kushanya, hatina kuwana danho rinozivikanwa revezera-kune-vezera rine maindasitiri ane simba semotokari, muchina kana simba - tisingarevi kuvhiringidzika kwemhando dzakasiyana dze eco kuratidza. zvakafanana: kuzvipira kwezvakatipoteredza kunzvimbo yedu yekufamba. Yakanyanya kupatsanurwa iindasitiri yeTourism, yakanyanya kusiyana ndezvatinofarira isu pachedu, zvatinokoshesa uye zvinosanganisira kubatanidzwa muzvirongwa zvezuva nezuva.
Chasara kufungirana kuti kunyangwe kuedza kwakasimba kwemunhu kuita nzira yekuenderera mberi uye zvisinei nekuramba yambiro uye zvido zvinoratidzwa nenyanzvi dzakawanda, diki diki diki rinongoratidzika kunge rakaitwa nevashoma vanonoka.
Kushanya uye Kugamuchira Vaenzi - chikamu icho chinopesana nematambudziko ese chakaonekwa chakasimba uye chemagariro, chehupfumi uye chinoenderana nemamiriro ekunze, chakatarisana izvozvi, mukumuka kwedenda repasirese, chokwadi chinorwadza chekushaya simba kwaro uye yakazivisa kusakosha kwehurongwa. Mugumisiro unopengenutsa zvakadini!
Tine dambudziko rechimiro, pfungwa dzakavharika, kushomeka kwekukurudzira, kufunga kwakawandisa asi pasina zano uye pasina chiito, kana yakawandisa isina musoro yekuratidzira mukubata nedenda, shanduko yemamiriro ekunze, shanduko yezvimiro, shanduko yesimba, European kubatana, kunyanyisa mune zvematongerwo enyika, kugarisana kwevanhu uye vapoteri? - Kana kuti ingori kushomeka kwekutaura? Muchokwadi, izvi zvaizotaura nyaya yayo nezve zera redu rinorumbidzwa re-e-communication uye multitasking.
Sezvo Covid-19 yakatemera zvakasimba mitemo yayo inorambidza nharaunda, misangano yehurumende chaiyo nemadenderedzwa emabhizinesi vakaratidza kubatikana kwazvo kutsvaga nzira dzehunyanzvi dzekusimudzira post-.COVID Tourism. Ichokwadi: Denda risati rasvika, kwaive nezviitiko zvakawanda zvepamusoro-soro nekuvapo kwemuviri: misangano yezvematongerwo enyika, makonferensi uye matafura ane mukurumbira - neindasitiri yerunyararo yepasirese uye masangano ayo ane mukurumbira zvakanyanya asipo. Uye ikozvino, nehukuru hwemagariro notches eCCIDID-19, ichienderana nekuchinja kwemamiriro ekunze-kukonzeresa njodzi uye zvakaipisisa zvinokanganisa vanhu uye zvivakwa - pane chimwe chinhu chakasiyana here? Zvinosuwisa kuwana Kufamba & Kushanya kwakafumurwa zvakare, kwakarasika kure, kukiyiwa pasi - uye kudonhedzwa kusvika padanho iro kunyange hugandanga hwepasirese muzuva rahwo hwaisazombofa hwakaita.
Zvichakadaro, zhizha rakasvika, tembiricha macurves akakwira, uye COVID-chiitiko macurves akadonha. Tariro dzakaunganidzwa dzokupora nokuzorodzwa dzakasunungurwa kuti dzigadzirire nzira yekariro dziri nani, uye zvimwe zvakadaro: nokuda kwokunzwisisa kunowedzera kuti, kutanga, kune tapuro duku yezvikumbiro zvehurumende, kana vanhu vasingadi kana kuti vasinganzwisisi pfungwa yavo; chechipiri, Kufamba & Tourism haifanire kushuvira kudzokera kune pre-COVID mamiriro, kunyange kana yakanzwa sechiyeuchidzo chisina kujeka chenguva dzakanaka 'dzekare'.
Kuita Zvakawanda - Pasina Kukunda, zvakadaro
Zvakadaro, panofanira kunge paine chimwe chinhu kwazviri: Sezvo takaronga zvirongwa zvakawanda zvekushanya mumakore makumi matatu apfuura uye kupfuura, tinodada kuva chikamu cheavo 'mapiyona' mavara 'akavhura magedhi':
Takaratidza chishuvo chedu chikuru uye kuzvipira mukuvaka pamwe nekuita Sustainable Tourism, yakadzika mugwara rebhizinesi uye nemitemo yehurumende. Takaita zvakawanda kuvandudza zvivakwa zvekushanya nekuvandudza tekinoroji yekutaurirana, kuvandudza masevhisi uye kusimudzira mafambiro, kusimudzira mapaki nemidziyo yemahombekombe, kudzidzisa mamaneja nevashandi, uye kuona mitambo mitsva nemikana yekutandara.
Pakupedzisira, uye mukutevedzera mirau yehurumende yekurwisa COVID, takaramba tichiona zvirambidzo zvekupinda uye zvinodiwa kune hutsanana nekuchengeteka. Isu taikurumidza kutsvaira nzvimbo dzedu, zvishandiso uye mamiriro ekushanda kuchengetedza vashandi nevatengi zvakafanana kubva kudenda, uye isu takagadziridza midziyo yedu yehunyanzvi kuchengetedza simba uye kuburitsa tsvina shoma.
Isu takatotanga kuseta maitiro matsva semhedzisiro yeCovid-19, sekusimuka kubva mumwaka kuenda kuzororo regore rose, kusimudzira mafambiro ekupedzisira uye kugashira mapoka e 'pod travel' (eshamwari dzine pfungwa dzakafanana), kubvuma kubhukidzwa kwenguva pfupi. kuyedza nzvimbo dzekushanda dziri kure ('hofisi-yekumba muzuva'), ichipa 'hybrid' mapakeji ekufambisa kubatanidza zviitiko zvechokwadi uye zvedhijitari zvekushanda & zvinangwa zvezororo ('kushanda'), kugadzira bhaketi runyorwa nzvimbo dzekufambisa uye 'homey' pekugara. Kuedza kwedu kwave kuri kwechokwadi, dzimwe nguva kunyangwe kwehunyanzvi, uye kupenga zvisingaite!
Sei isu tisingakwanise kukunda muruzhinji kana zvisiri zveruzhinji mumatunhu akasiyana-siyana ehurumende? Kuti titore chikamu muzvisarudzo zvakabatana zvakatorwa kwete zveKushanya chete, asi kwatiri tese, sezvo tese takabatwa? Sei vatungamiriri venzvimbo dzekushanyirwa uye mamaneja vakatadza kuita kuti nzvimbo dzipenye sechikamu chezvese-zvese 'kutarisira nzvimbo'? Sei Travel & Tourism, kunze kwekuve indasitiri, isingazivikanwe seyakaenzana neseti yese yezvishandiso zvekutaurirana zvinokwanisa kusimudzira mukurumbira wenyika, dunhu, kana guta mukuzara kwaro? -Nei vatungamiriri vane hungwaru, mamaneja uye vane chekuita neKushanya nekushanya vasina kumbobvira vaunganidza vashandi vese vekushanya nevekugamuchira vaenzi kuti vacheme kusagutsikana kwavo nerusarura rwakadzama pakuratidzira kuzvigaro zvehurumende nemaparamende?
ZveKufamba & Kushanya idhirama, asi yekumuka-kufona zvakare. Inokwezva zvikuru kune mutoro wedu wakagovana uye mabasa anotevera mukati meiyo yakaoma yemagariro nehupfumi uye yezvakatipoteredza sisitimu yenzvimbo yekufamba.
Kuvanhu veko inzvimbo yavo — 'nharaunda' yavo, ringave guta, dunhu kana nyika, kune vashanyi ndiyo 'kwavanosvika', kazhinji kacho zvinotarisirwa uye maonero akasiyana. Nekudaro, hukama uye chinangwa ndiwo (w) maumbirwo akazara ekugadzira 'corporate' kuzivikanwa, kana 'unhu', yerwendo rwekuenda se 'system': nzvimbo yekugara, yekushanda, yekuisa mari, uye yekufamba.
Kuzivikanwa kwekambani kunoenderana nekunzwisisa kwakazara mukati meiyo system, ingave kwainoenda kana kambani. Izvi zvinoreva kuti kuita kwayo kwese seyuniti chinhu chakanaka chakanyanya kukosha pane kungoverengera kwemhedzisiro yakaitwa nenhengo (= mota inodarika huwandu hwezvikamu zvayo zvakasara). Ichi chirevo chinobata mukati meiyo system. Kunze kwehurongwa, zvisinei, toti, tichitarisa kusiyana kwetsika dzedunhu rose, zvinoenda neimwe nzira: Nzvimbo dzakasiyana dzedunhu rino dzinonyanya kukosha mukuita kwavo kupfuura iyo yese.
Izvi zvinotsanangura nenzira yakapfava budiriro yatinoona segangaidzo: Naizvozvo, vanhu vari kupatsanuka mumativi maviri: kune rimwe divi, kuti vabatsirwe nekuita kwakanaka, kunonangana kune chimiro chepasirese chekutaurirana network (iyo isinganzwisisike ' global village'), nerumwe rutivi, kudzivirira kuzivikanwa kwemunhu, maitiro anoenda kune zvidiki zvidimbu zvetsika zvisingarambe kusiyana kwavo.
Iyi maitiro inobata zvakanyanya kushambadzira kwedu nekusimudzira. Dambudziko nderekuchinja kubva kumutsara kuenda kune yakaoma masisitimu, iyo yakafanana neshanduko kubva kune analogous kuenda kudhijitari manejimendi maitiro. Nezve manejimendi evashanyi, ndezvekutyora nhamba yesarudzo yevanogona vashanyi, zvakasiyana sezvavari, kuti vawane akatsanangurwa mapoka emagariro, anonangwa maererano nemararamiro, basa, nzvimbo, chiitiko, kirasi, tsika, kufanofungidzira, zera, bonde, nezvimwewo. Izvi zvinoda kusiyanisa uye kusiyanisa kupa kwedu, tichitarisa kuronga zvinopihwa nevatengi zvekushanya uye kudzidzira nzira yemunhu kune vangangove vashanyi vedu.
Mukuita izvi, isu tinofanirwa kunyatsoziva kuti rudzii rwevanhu vatisingade kugamuchira, zvakadaro zvakanyanya, rudzi rwevaenzi rwatingade kugamuchira, sezvavanofanirwa kuita zvakakwana kune yedu kupa - uye yedu. pachedu mafungiro - sevaenzi vedu takasarudza kuvafadza, kudzoka zvakare, kugara kwenguva refu, uye kutikurudzira sevaenzi vane pfungwa dzakafanana. Pane imwe pfungwa iri kuuya, yakawedzeredzwa sezvazvingave, asi ichizvikurudzira - iyo pfungwa yemafungiro atinowanzo tora kusarudza maroja enguva refu.
Mushanyi Ega - Muenzi Wedu
Munguva dzematambudziko, zvinoreva 'munhu' zvinogona kushanduka zvishoma nezvishoma, kubva pakufungirwa kuti 'zvemunhu' kuenda kuhukama chaihwo uye hwechokwadi hwevezera-kune-vezera pakati pevanhu.
Kufamba & Kushanya sebhizinesi rebasa rakavakirwa pakuvimbika kwevanobatanidzwa uye kuvimbana. Kana izvi zvinodiwa zvikazadzikiswa zviri nani, ndipo panozowedzera ukama hunofadza uye ‘mutsa unobhadharwa’ unoshanda zviri nani.
SevaMufambiro & Tourism vanokosha-vanedavi tichaita nhamburiko dzakabatana kuti titangezve kukoshesa nyaya, maererano nemhando (vs. uwandu), tsitsi (vs. egotism), zvinopihwa-zvakagadzirwa (vs. lump-sum package), personalized visitor. -management (vs. mass-tourism channeling), chinangwa-mapoka anodiwa chaizvo uye anotariswa, maererano (vs. 'munhu wose anogamuchirwa'), kupindirana-kubatana (cross-sector, cross-industry), kuchena (anti-littering zvirongwa uye kutambisa-marara), chengetedzo uye chengetedzo (yakachengeteka/inodavirira mitemo nemitemo, nharaunda dzakachengeteka uye dzine hutano), masevhisi akasimbiswa anokosha mari - uye pfungwa yakasiyana kwazvo yesimba nekufamba - kusimba rinodzokororwa uye e-… kufamba.
Izvo zvirinani zvakagadziriswa uye zvemunhu vanoshuvira vashanyi vari kutemerwa uye kukokwa, kunowedzera kune mubairo kudzoka pakudyara, kunowedzera kunakidza ambience panzvimbo, uye zvakanyanya runyararo nzvimbo.
Strategic Sarudzo dzekuyera Kubudirira
Chinhu chinogumbura chagara chiri nzira yatinoyera nayo kubudirira kwebhizinesi muKushanya: Kazhinji, zviitiko zvedu zvehupfumi zvinotemerwa zvakanyanya nehuwandu hwehuwandu sehuwandu hwevashanyi vanosvika uye nehusiku humwe, kwete kuburikidza nehurongwa hunoratidza chigadzirwa uye zviratidzo zvemhando yebasa. . Aya ndiwo chaiwo ekuona quantifiable budiriro. Sezvo zviri nyore kubata, tichiri kubvumira hupfumi hwemwero kuti hubude hupfumi hwehukuru. Nepo kushandirapamwe kunyangwe mukati mechikamu cheTourism kuchiri kusiya zvakanyanya kudiwa, kukwikwidza kunorwirwa pamusoro pemutengo, pane pamusoro pe'kunaka'.
Kuita uku kwave kukuvadza kunaka kwechigadzirwa uye sevhisi, uye zvakazofa mune hupfumi mune dzakawanda zviitiko, pasina kana Covid-19 yaishandiswa seascapegoat.
Kukura kwemhando kunoreva kuenda 'systemic', kuitira kuvandudza chigadzirwa, sevhisi uye kutaurirana, kusiyanisa mukati meiyo yakasarudzwa hunyanzvi, nekutarisa kune mabhenefiti evatengi. Mushure mezvose, kufarira kwevatengi (!) - kwete kungogutsikana chete - kwakakosha kuedza kuwana mibairo yenguva refu uye kusvika pakusimba. Kuziva uye kuona mapoka edu akasarudzika uye matambudziko avo uye zvavanoda zvichave zvakakosha, tisati taongorora (zvisinei zvakanyanya kufanorongerwa) masimba, kusasimba, mikana uye kutyisidzira (SWOT) yechigadzirwa chedu chekushanya.
Izwi rakakosha ndere 'hunyanzvi' semaitiro echisikigo anotiratidza, kubva kune vakangwara vanoita zvepfungwa vakawana zvinokwezva dzidziso kubata kuoma makumi emakore apfuura:
Kune, semuenzaniso, Paul R. Niven, Muvambi uye Mutungamiri Senalosa Group, Inc., manejimendi chipangamazano ane hunyanzvi muhurongwa hwekuita. Niven yakakanda iyo 'Balanced Scorecard', chiridzwa chakagadzirwa naRobert Kaplan naDavid Norton muma1990, kuyera budiriro yebhizinesi neruzhinji / NGO munzvimbo ina dzakasiyana, asi dzine hukama: mutengi, maitiro emukati, kudzidza kwevashandi nekukura, uye mari.
Panenge panguva imwe cheteyo, Frederic Vester, nyanzvi yezvechemist uye nyanzvi munyaya dzezvakatipoteredza, akaita shasha mukugadzira dhairekitori rinosanganisira manejimendi nemagadzirirwo akaomarara, 'Sensitivity Model Prof. Vester'. Mumuenzaniso wake, Vester anodzivirira kugadzikana sekugona kwemaitiro 'akaitwa nevanhu' kushandisa muenzaniso wezvakasikwa wekuzvitonga uye kuchinjika, kuitira kuti ive nechokwadi chekubudirira: Panzvimbo yekuvimba neyakajairwa 'mutsara' maitiro ekuronga kugadzirisa matambudziko ega ega, Vester anochengeta tarisiro yemamiriro ehurongwa: ongororo yake yedambudziko pivots iyo "Art yeInterconnected Thinking": kudyidzana uye kubatanidzwa kwedzimwe nzvimbo dzehupenyu dzakabatana nehurongwa hwakaongororwa, nekudzivirira kurasika mune zvine hungwaru ruzivo, uye kushandisa. pachinzvimbo nhamba yakajeka yezvinogadzirisa zvinhu. Vester inopa unopfuura mukana weku 'fuzzy logic', dzidziso inobvisa nzvimbo pakati 'nechaiyo chose' uye 'chakaipa chose' - "kuitira kunyatsobata maitiro asina kunyatsojeka" (mushure memusayendisiti Lotfi Zadeh).
Zvichienderana nemisimboti yebiology uye dzidziso yekushanduka-shanduka, kunyanya pamutemo wechisikigo pakushandiswa kwakanyanya kwemasimba, Wolfgang Mewes akatanga 'shortfall concentrated strategy' (EKS Engpasskonzentrierte Strategie) uye akatsanangura misimboti yayo ina:
Isa pfungwa dzako pane zviwanikwa uye simbisa midziyo
Dissolve shortfall kana bottleneck
Rongedza mabhenefiti emutengi pane kukoshesa purofiti yako
Koshesa zvinhu zvisingabatike/zvisiri zvinhu pane zvinobatika/zvinhu.
Kushandisa iyo 'shortfall concentrated strategy' inosanganisira zvinhu zvitatu zvekuyera kubudirira kwebhizimusi 'imwe nzira':
Iyo kushomeka (kana bhodhoro) yakatarisana zano inoshanda seyakavimbika 'scout' kuti iwane yakanakisa mhedzisiro, maererano nehunyanzvi uye kuzivikanwa kwezvigadzirwa zve niche nemasevhisi. Aya ma niches anogona kunge ari madiki, asi zvese zvinopa mubairo kana zvakanyanya kutariswa uye kutengeswa. Iyo yakanyanya 'kunongedza', kana kutarisisa iyo yakasarudzwa nyanzvi ndeyekuti, yekutanga zano iri rinogona kusimudzira nzvimbo yekushanya kune hutungamiriri hwemusika uye kusaga.
Kuti ugone kukwidziridza chinangwa chakatsaurirwa kukusimudzira Tourism uye, nehuwandu hushoma hwekiyi-data, tora yakasimba Unique Marketing Proposition (UMP) yemutengi, zano iri rinokurudzirwa kumabasa enguva refu eprojekiti. Isu tinofanirwa kuyeuka kuve - uye kuramba tiri - yakanakisa kugadzirisa matambudziko Tourism kambani kana Destination Management Organisation (DMO) - kwete kune chero munhu, asi kune mashoma akanyatsosarudzwa akasarudzika mapoka.
Panzvimbo pekungowedzera zvinhu zvakasiyana zvemasevhisi edu pamwe nemuchero wemari kuti uunganidze pasuru yekufambisa, zviri nani kuti tiite kuti kuverenga kwedu kuve 'systemic', kana 'simba', zvichibva pane tarisiro yeboka-rimwe mutengo-inodzikira mhedzisiro. Panzvimbo pekuyeresa mitengo pamutengo wega wega pamwe nepurofiti, zvinodiwa nemapoka avanoda uye kugadzirira kwavo kubhadhara mutengo zvichaonekwa, zvichiteverwa nehunyanzvi hwakakodzera hwekudzikisa mwero wemutengo unodiwa. Iyo systemic calculation inofanirwa kugara ichisanganisira innovation, iyo liquidity inogadzirwa inofanira kuiswa zvakare. Matanho maviri anofanira kutorwa: chekutanga, kuvandudza mashandiro maererano nechinhu chinoshanda chekuvandudza, kuitira kukonzeresa kuita kweketani; chechipiri, kuona kuda-mapoka-kugadzirira kubhadhara, uye kuenzanisa mari inotarisirwa kuwedzera nemari inowanikwa. Chinangwa chehurongwa hwekuverenga ndechekuvandudza mabhenefiti evatengi nekukurumidza kupfuura zvinoita vakwikwidzi.
Zvibodzwa zvine mwero zvinotarisa kubatanidzwa kwezvinhu zvisingabatike muzvinhu zvinobatika uye zvemari zvekambani. Mamiriro akakosha anofanirwa kutarisirwa. Zvibodzwa zvine mwero zvakabva pazvitsva zviviri: chekutanga, nyanzvi yekemisitiri Justus von Liebig zvakawanikwa pamitemo yekushanduka-shanduka yezvipenyu masisitimu. Kubudirira kwavo hakubvi pane chimwe chinhu - semuenzaniso midziyo yemari -, asi nechinhu chinonyanya kushaikwa, icho chinodaidzwa kuti 'minimum factor'; chechipiri, dambudziko kune vatungamiri nderokuona zvishoma uye kuita zvinoenderana, uchiziva kuti zvinhu zvisingabatike zvine basa rinokosha. Mukuita izvi, masimba ese anogona kutariswa pane diki chinhu, kuitira kuti uone zvinokoshesa vatengi kana kugadzirisa dambudziko ravo guru, iro rinozogadzirisa otomatiki matambudziko madiki anosanganisira. Zvibodzwa zvine mwero zvinofambisa shanduko kubva kumutsara kuenda kune yakazara kufunga nekuita.
Zvinoratidzika zvakaoma kusarudza nzira yekusarudza, vane zvakawanda zvakafanana. Kunyanya kuwirirana kwavo kubatsira kubata masisitimu akaomarara: ese akatsaurirwa kuwana mhinduro dzakanakisa kumatambudziko - kana matambudziko - ayo anowedzera dhigirii rekuomarara acharamba ari muzvitoro, achidaidza vatungamiriri nevatori vechikamu kuti vaite sarudzo yakanaka munzvimbo inofarira. mukana wekuva nechokwadi. Sezvo kusimba kwechokwadi kunotanga padanho resimba, kutanga kwezvose, boka diki diki rekufungidzira rinowanikwa pamavambo chaiwo - munhu wega, munhu. Tese tinobatwa neCovid-19 uye nekushanduka kwemamiriro ekunze, uye mumwe nemumwe wedu anofanirwa kuita nepatinogona napo kudzivirira kana kuve nemhedzisiro inogona kukonzerwa nenjodzi idzi. Mukuita izvi, mumwe nemumwe wedu - vese sevashanyi nevagamuchiri - anokodzera zvakaenzana kutariswa nerutsigiro. Izvi zvinonyanya kubata Kufamba & Kushanya nekusvetuka kwayo kwekutenda kunodiwa nehunhu hwakakosha hwekugamuchira vaenzi vanobhadharwa.
Mamiriro akapatsanuka eTourism anogona kunge ari zano kune pfungwa inogona kungotsanangurwa se 'yakapusa': Inoonekwa seindasitiri yekugadzira yakawedzera kukosha uye kuunza mari, Kufamba & Kushanya ndiwo mufananidzo wegirazi wesocial-hupfumi uye nharaunda system. Ichitorwa se 'seti yezvishandiso zvekutaurirana' kuwedzera mukurumbira kwenzvimbo, Tourism sezviri pachena inofanirwa nehungwaru uye mabhora kubva kuvatungamiriri vayo, kuti vamire kune zvese zvinodiwa patsika yavo yekugamuchira yekutengeserana uye zvinangwa zvechinangwa chavo uye raramo: kuvandudza nekuchengetedza Sustainable Travel & Tourism.
Kiyi-Nyaya dzekuwana Yakasimba Foothold Mushure meDenda
Nguva pfupi-/Yepakati Penguva:
Ziva mitambo mitsva nemikana yekutandara;
Shanda kubva kune mwaka kuenda kune gore rose kuenda kuzororo;
Wedzera kufamba kweminiti yekupedzisira uye gamuchira 'pod kufamba' mapoka (mapoka eshamwari);
Gamuchira kubhukidzwa kwenguva pfupi, kwakanangwa kuyedza nzvimbo dzekushanda dziri kure;
Ipa 'hybrid' mapakeji ekufambisa anobatanidza zviitiko zvechokwadi uye zvedhijitari zvekushanda zvakasanganiswa & zvinangwa zvezororo;
Gadzira rondedzero yemabhaketi ekufambisa uye 'homey' pekugara.
Vakai Sustainable Tourism, yakadzika-yakadzika mune bhizinesi nhungamiro uye zvirevo zvemishoni;
Kuvandudza masevhisi uye kuwedzera mafambiro ekufambisa;
Dzidzisa mamaneja nevashandi nguva dzose;
Gadzirisa zvivakwa zvekushanya, kusimudzira tekinoroji midziyo, kuisa pamberi Renewable Energy, uye kuderedza mapurasitiki nemamwe tsvina;
Teerera kune megatrends nyowani, senge:
-Vatengi' 'zvishuwo zvitsva zvekuyanana', nharaunda, hunhu uye tsika;
- Kuwedzera kubatana, 'neo-ecology' uye shanduko yevakadzi;
- Shandura kubva ku'vaenzi' kuita 'resonance mamaneja';
- Yakakwidziridzwa e-kutaurirana ne 'yakawedzerwa chokwadi' gadget;
Tarisa uone kana kwete aya maitiro ...
- zvakakodzera kuedza, kana kuti kutaridzika sezvishoma pane zvemwaka fashoni mamiriro,
- sanganisira chaiyo kana yakangotarisirwa kuwedzera kukosha,
- inopindirana netsika dzakasimbiswa dzekugamuchira vaeni,
... uye tora mhedziso yega.
mutsa Individual utariri Marketing Sangano kuenderera ushanyi
IATA: World Tourism Network Kudzoreredzwa kweAirline Passenger Demand
Barbados Inotyora neRoyal Britain: Inotaridzika KuAfrica
Gingival Retraction Kits Musika Chikumbiro, Mafambiro...
Kurapwa Kutsva kweDiabetic Foot Ulcers
Kukanganisa kweDanda papfungwa dzevana...
Airboats Musika Saizi, Govera, Kukura Maitiro, uye...
Ukraine International Airlines inobvisa maIndia kubva ...
Mutungamiriri weEthiopian Group anozivisa kuenda pamudyandigere
SAUDIA inotanga itsva B2B yekufambisa manejimendi mhinduro